mardi, 23 juin 2020 22:59
Vatobe - 67ha: Nitrangana haintrano goavana
Setroka nanaka-danitra no nanaitra ny mponinan’Antananarivo nanomboka ny fiafaran’ny tolakandro teo. Nitrangana haintrano goavana teny amin’ny faritra Vatobe 67ha, Boriborintany Voalohany, Antananarivo Renivohitra. Trano hazo ny ankamaroan’ireo nirehitra.
Nanao izay ho afany ny Fokonolona amin’ny famonoana ny afo.Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina avy ao Tsaralalana.
Mba hisorohana ny mety ho fihitaran’ny loza dia niroso tamin’ny fanapahana ny herinaratra eny an-toerana ny JIRAMA.
Nidina nijery ny fahavoazana teny an-toerana sy nitondra fanampiana vonjy aina ho an’ireo traboina ny solontenam-panjakana sy ny teo anivon’ny Governoran’ny faritra Analamanga.
Nampahery ireo niharam-boina ihany koa, indrindra ireo fianakaviana namoy havana tao anatin’izao haintrano izao.
mardi, 23 juin 2020 22:45
Sambava: Nosatrohan’ny olona fehiloha tsilo ilay mpamaky trano
Tany ampiandrasam-paty tao Ambalamasy ny tompontrano no nanararaotra nitsofoka ilay tovolahy nanao ny asa ratsiny. Nisy nahatsikaritra anefa io fidirany io ka ireo no niantso vonjy.
Tsy lavitra teo ny andrimasom-pokonoloa ka nifarimbonana nisambotra an’ilay tovolahy. Tsy nahita irika nivoahana ny trano izy, izay efa nahazo ny finday izay sendra tao an-trano.
Nosatrohin’ny Fokonolona fehiloha tsilo izy mba hilazany ny marina. Matetika isehoana halabotry rahateo ao amin’io faritra io. Tsy nety nilaza ny marina izy ka dia nentina tany amin'ny biraon’ny Fokontany mandram-pahatongany Polisy, izay tonga nisoroka ny fitsaram-bahoaka.
mardi, 23 juin 2020 21:59
Zoto mianakavy: Niainga teto Mahajanga ny hariva teo niazo an’i Manakara
Niala teto Mahajanga ny fiafaran’ny tolakandro teo ry Zoto efa-mianaka sy ny fianakaviany, hitondra ny nofomangatsian’i Alphonsine, vadiny, hiazo an’i Manakara handevenana azy.
Nodimandry ny alin’ny alahady hifoha ny alatsinainy 22 jona 2020 i Alphonsine, noho ny aretina tampoka nahazo azy raha hiazo an’i Mahajanga izy ireo ny sabotsy teo.
Milaza ny mbola hanohy ny fitetezana an’i Madagasikara i Zoto efa-mianaka aorian’ny fandevenana any Manakara. Hiverina haka entana ao Mahajanga avy eo hitodi-doha miazo an’Antsiranana amin’ny bisikilety sy an-tongotra.
mardi, 23 juin 2020 21:14
Ampandriakilandy - Antsohihy: Ramatoa hody avy any an-tsaha maty nisy namira famaky ary tapa-tanana
Renim-pianakaviana iray, 48 taona, no hitan’ny olona nitsirara tao amin'ny toerana atao hoe Andapihely Kaominina Ampandriakilandy, Distrika Antsohihy ny alatsinainy 22 jona 2020 tokony ho tamin'ny 06 ora hariva.
Nidina nijery ny zava-nisy teny an-toerana ny Ben'ny tanàna sy ireo Zandary ao amin'ny « Poste Fixe » Ampandriakilandy miaraka amin'ny dokotera ao an-toerana. Mbola niaina ilay ramatoa, saingy teny an-dalana hamonjy ny tobim-pitsaboana dia tsy tana intsony ny ainy.
Nahitana dian-kapoka sy fira famaky teny amin'ny lohany ary tapaka ny tanany havanana.
Manan-janaka roa mianadahy ity renim-pianakaviana ity, izay mpamboly no asany. Avy niasa tanimbary ka teny an-dalana namonjy fodiana izy no niharan'izao herisetra izao.
Mandeha ny fikarohana ny nahavanon-doza ifarimbonan’ny Fokonolona sy ny Zandary.
mardi, 23 juin 2020 17:02
JIRAMA: Mandray andraikitra ho an’ireo mpanjifa niharan’ny fiakaran’ny faktiora voarain’ny mpanjifa
Taorian’ny fitarainan’ny mpanjifa maro teto Antananarivo momba ny fiakaran’ny faktiora dia niroso tamin’ny fanadihadiana ny JIRAMA. Hita tamin’izany fa nisy tokoa ny hadisoana teo amin’ny index ary ny ankamaroan’ireo hadisoana dia niniana natao.
Efa nanao ary manohy hatrany ny ezaka amin’ny fifandraisana an-tsoratra na an-tarobia amin’ireo mpanjifa voakasik’ireo fahadisoana ireo ny JIRAMA. Izany fifandraisana izany no hahazoana mandalina ny olana eo amin’ny faktiora sy manao ny fanitsiana izay tokony hatao. Mpanjifa maro no efa nantsoina sy nanatona ny JIRAMA ary efa nahitana vahaolana avokoa.
mardi, 23 juin 2020 16:43
Antsiranana: Sady efa tsy nanao takom-bava no mbola saika hanao kolikoly amin’ny 5 000 Ariary
Lehilahy iray no voasambotra teny amin’ny lalam-pirenena faha-6, Fokontany SCAMA, Antsiranana ny alatsinainy 22 jona 2020, tratra tsy nanao takom-bava nandritra ny fisafoana natao. Rehefa tratran’ny mpitandro ny filaminana, dia mbola nandraviravy vola 5 000 Ariary an'ireo mpitandro ny filaminana mba hamotsorana azy.
Endrika kolikoly io, ka dia notazomina atao famotorana ary hatolotra ny Fampanoavana.